Banyere Anyị - Kaiyuan Chicheng Abrasive Material Co., Ltd.
Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd. e guzobere na 2003. Ọ bụ a trading ụlọ ọrụ ọkachamara na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ahia, onwe-management na gị n'ụlọnga ibubata na mbupụ nke ngwaahịa na technology. Companylọ ọrụ a dị na Hedong District, Tianjin. Dị ka ọdụ ụgbọ mmiri obodo, Tianjin nwere eke uru maka mbubata na mbupụ azụmahịa, na njem bụ adaba.
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere: ngwaahịa kemịkalụ potassium fluoborate (belụsọ ngwongwo dị egwu na ọgwụ ndị na-ebu ụzọ), akụrụngwa (zirconium corundum, abramos seramiiki, cryolite), ngwaọrụ abrasive (wiil dị iche iche, ihu igwe, mgbawa, emery diski) na akwa mmepụta (polyester niile, owu niile, owu polyester) maka akwa emery, wdg.
Ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa azụmaahịa nke ụlọ ọrụ na-agbasa kwa ụbọchị, ụlọ ọrụ ahụ enwetakwa ntụkwasị obi nke ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ site na mma ngwaahịa ya na aha ọma ya! Nke a na-eme ka ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa nwere nnukwu aha na ahịa òkè n'ụlọ na mba ọzọ. N'otu oge ahụ, anyị na-etinyekarị ọdịmma nke ndị ahịa anyị mbụ, anyị raara onwe anyị nye inye ngwaahịa na ọrụ ka mma nye ndị ahịa anyị ọ bụla.
Ihe omuma ihe omuma anyi: "ime ihe n'eziokwu, onye ahia mbu"
Anyị ngwaahịa uru: "O zuru ezu ọkọnọ na ezi uche price"
Ekwenyere m na nkwado ọ bụla ga-eme ka anyị bịarukwuo ibe anyị nso!